Ndị ọrụ gọọmentị gosipụtara igwefoto na Redmi Rịba ama 8 ga | Gam akporosis
Ndị ọrụ gọọmentị gosipụtara igwefoto na Redmi Rịba ama 8 ga-enwe
Ebe ọ bụ na Xiaomi hapụrụ Redmi ka ọ rụọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ nweere onwe ya ma ọ bụghị naanị usoro na katalọgụ ya, Redmi ewerewo ewu ewu na-enwetụbeghị ụdị ya n'ahịa ahụ, ọ malitere site na Ihe ngosi RedN 7, nke emere na Jenụwarị nke afọ a dị ka akụkụ nke mmalite nke onye nrụpụta a n'ahịa ụwa. Kemgbe ahụ, atụmatụ mgbasawanye ya agbadoro anya na ntinye nke ọdụ ụgbọ ala dị n'etiti na-enweghị ike imeri ego, ọ bụ ya mere ọgbọ ọgbọ ya ga-ahọrọ, nke ga-abụ nke Ihe ngosi RedN 8 y 8 Pro.
Na mmepe ohuru, nke bu nke anyi ga ekwu banyere ya, companylọ ọrụ ahụ gosipụtara ụdị sensọ nke usoro igwefoto quad azụ ga-arụ, na-ahapụ ịghọta ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya n'aka ha.
Dabere na ihe ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara site na post e mere na Weibo, Redmi Rịba ama 8 usoro ga-ụlọ 48 MP isi igwefoto, ọ bụ ezie na nke a na-egosi na ọ bụ nkwenye karịa ihe ọ bụla ọzọ. Agbanyeghị, ihe na-atọ ụtọ ịmara bụ ọrụ ndị ọ bụla sensọ ga-ahụ maka ya.
Maka ndị na-ebido ya, nke 48 MP gbara, n'ezie, bụ anya anya, na enweghị ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka nke a: ọ ga-elekwasị anya n'inyefe foto kachasị mma n'oge ọ bụla. Nke a ga-akwado ya site na a igwefoto obosara sara mbara, otu omimi nke ubi na otu nnukwu nnukwu.
Ya mere, anyị nwere ike ichefu iji nweta ihe mmetụta ToF (Oge nke ụgbọ elu) na nke ọ bụla n'ime ụdị abụọ ahụ que ga-ada ahịa na August 29, nke bụ ụbọchị nke ụlọ ọrụ ahaziri nke ọ ga-arụ ọrụ ngosi nke smartphones ndị a na-atụ anya n'etiti.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị ọrụ gọọmentị gosipụtara igwefoto na Redmi Rịba ama 8 ga-enwe
Lenovo K10 Cheta nwere ụbọchị ngosi
Leaked ọhụrụ oyiyi nke Nokia 7.2